VAG-COM N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Ọrụ bụ isi na-arụ ọrụ bụ maka ndị nwere nkwarụ bụ ndị ọ na-esiri ike ịbanye na mkpokọta, ya bụ, iji pịa ọtụtụ bọtịnụ n'otu oge. Ma n'ihi ọtụtụ ndị ọrụ nkịtị, njiko nke njirimara a bụ naanị ihe nkedo. Ka anyị chọpụta otu esi ewepụ nsogbu a na Windows 7.
Hụkwa: Otu esi kwụsị ọrụ ịbanye na Windows 10
Ụzọ iji mechie
A na-ejikarị arụ ọrụ a n'amaghị ama. Iji mee nke a, dịka ntọala ndabara nke Windows 7, ọ bụ iji pịa bọtịnụ ugboro ise n'usoro. Mgbanwe. O yikarịrị ka nke a nwere ike ịbụ obere ihe, ma ọ bụghị ya. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu na-ata ahụhụ site na ntinye aka nke ọrụ a site na usoro a. Ọ bụrụ na ịchọghị ngwá ọrụ aha ya, mgbe ahụ, ajụjụ nke ịkwụsị ya dị mkpa. Enwere ike gbanyụọ ya ka ọ bụrụ ịmalite ịmalite na iji oge ise pịa Mgbanwe, na ọrụ n'onwe ya mgbe ọ dịlarị. Ugbu a tụlee nhọrọ ndị a n'ụzọ zuru ezu karị.
Nzọụkwụ 1: Mee ka ọrụ rụọ ọrụ na iji oge ise pịa Mgbanwe
Nke mbụ, tụlee otú ị ga-esi gbanyụọ ọrụ site na pịa oge ise Mgbanwe.
Pịa bọtịnụ ahụ Mgbanwe ugboro ise iji kpọọ ọrụ ahụ mee ka windo. Akara ga-amalite, na-akpali gị ịmalite ịrapara (bọtịnụ ahụ "Ee") ma ọ bụ jụ ịgbanye (bọtịnụ "Mba"). Ma echela ngwa ngwa ịpị bọtịnụ ndị a, kama gaa na ntinye okwu na-atụ aro mgbanwe gaa "Oghere maka inweta".
Na shea meghere "Oghere maka inweta". Wepụ akara site na ọnọdụ "Kwado igodo ndị dị mkpịsị ...". Pịa "Tinye" ma "OK".
Ịmebata ọrụ ahụ na-akwadoghị ya na pịa oge ise Mgbanwe ga - enwe nkwarụ.
Nzọụkwụ 2: Gbanyụọ arụ ọrụ na-esite n'aka "Ogwe njikwa"
Ma, ọ na-eme mgbe nrụrịrịrịrị ọrụ ahụ arụrịrị ọrụ ma na ịchọrọ ịgbanye ya.
Pịa "Atụmatụ pụrụ iche".
Pịa na aha nke ala "Agbanwe Agbanwe ntọala keyboard".
Na-aga n'ime shea "Enyemaka Ntube", wepụ akara site na ọnọdụ ahụ "Kwado igodo ndị dị mkpịsị". Pịa "Tinye" ma "OK". Ugbu a, ọrụ a ga-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ chọrọ ka ị kwụsị ọrụ site na pịa oge ise Mgbanwedịka na usoro gara aga, kama ịpị "OK" pịa akara "Isetịpụ mkpịsị ugodi".
Ụkwụ amalite "Tọọ igodo dị nro". Dị ka ọ dị na mbụ, wepụ akara site na ọnọdụ ahụ "Kwado igodo ndị dị mkpịsị ...". Pịa "Tinye" ma "OK".
Nzọụkwụ 3: Gbanyụọ arụmọrụ n'ọrụ site na Malite menu
Gaa na windo "Enyemaka Ntube"Iji kwụsị ọrụ a na-amụ, ịnwere ike iji menu "Malite" na ụzọ ọzọ.
Pịa "Malite". Pịa na "Mmemme niile".
Gaa nchekwa "Ụdị".
Ọzọ, gaa ndekọ "Atụmatụ pụrụ iche".
Họrọ site na listi "Oghere maka inweta".
Ọzọ, chọọ maka ihe ahụ "Enyemaka Ntube".
Window aha n'elu bu oru. Na-esote ya, mee ya n'ime ihe niile a kọwara na Usoro 2malite site na isi 4.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụrụ na i meghere igodo mkpịsị ugodi ma ọ bụ mepee windo nke a na-atụ aro ka ịgbanwuo ya, ịkwesighi ịtụ ụjọ. Enwere usoro omume doro anya nke a kọwara n'isiokwu a, nke na-enye gị ohere wepu ngwá ọrụ a ma ọ bụ gbanyụọ ọrụ ya mgbe ọ gwụsịrị ugboro ise Mgbanwe. Naanị ị ga-ekpebi ma ị chọrọ njirimara a ma ọ bụ na ị dị njikere ịhapụ ya, n'ihi enweghị mkpa iji ya.